အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ကျွမ်းကျင်မှု တိုးတက်စေမည့် နည်းလမ်း (၇၀) - အပိုင်း (၈) - Myanmar Network
Posted by Language Republic on May 15, 2012 at 14:25 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
၃၆။ အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့ ကလေးစာအုပ်တွေကိုဖတ်ပါ။ ဒါကလည်း အင်္ဂလိပ်စကားပြော ကလေး ရုပ်ရှင်တွေကို ကြည့်သလိုပါဘဲ။ လူကြီးအတွက် စာအုပ်တွေမှာထက် အရုပ်တွေပိုပါတော့ ဖတ်ရတာ ပိုလွယ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကို နားလည်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်ပြီး ရောင်စုံ စာမျက်နှာတွေမို့ ဖတ်ချင်စဖွယ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၃၇။ သင်ယူလေ့လာရမယ့် ဘာသာစကား အသုံးအနှုန်းတွေကို စာရင်းလုပ်ထားပါ။ ဥပမာ Vocabulary စာရင်းလုပ်ထားပါ။ Vocabulary စာရင်းကို လေ့လာကျက်မှတ်ဖို့ အချိန်မရလို့ စာရင်းထဲမှာ Vocabulary တွေ စုပုံလာနေသည့်တိုင်အောင် ဘယ်စကားလုံးတွေကို တတ်ဖို့လိုတယ်၊ ကျက်မှတ်ရမယ့်စာရင်းထဲမှာ ထည့်ထားရမယ်ဆိုပြီး ရွေးချယ်ရတဲ့အတွက် အဲဒီစကားလုံးတွေ တတ်ဖို့ အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။
၃၈။ Vocabulary စာရင်းကို တစ်နေ့ ၃-၄ ကြိမ် ပြန်ကြည့်ပေးပါ။ အလုပ်သွားတဲ့လမ်းမှာ၊ ရထားစီး၊ ကားစီးသွားစဉ်မှာ Vocabulary စာရင်းထဲက စကားလုံးတွေကို မှတ်သားနေရတာ အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် ဒါမှမဟုတ်ရင် ရှက်တယ်ဆိုရင် အီလက်ထရောနစ်အဘိဓာန် (Electronic Dictionary) ထဲမှာ ထည့်ထားလို့ရပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် လက်ကိုင်ဖုန်းထဲက To Do List (လုပ်စရာများစာရင်း) ထဲမှာ ထည့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း mp3 ဖွင့်စက် (ဥပမာ iPod ) ထဲမှာ စာသားဖိုင်အနေနဲ့ ထည့်ထားလို့ရပါတယ်။ Format တစ်ခုကနေ တစ်ခုပြောင်းပြီးတော့ အဲဒီလိုအချက်အလက်တွေ စကားလုံးတွေ ထည့်နေရတဲ့အတွက် အချိန်အလဟဿဖြစ်သွားတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် ဒီလိုမျိုး Vocabulary တွေကို အချိန်ပေးပြီး အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အဲဒီ Vocabulary ကို တတ်သွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၃၉။ Vocabulary စာရင်းကို အင်္ဂလိပ်လို တစ်မျိုးတည်းသာ ရေးပါ။ ဘာသာပြန် မနေတော့ဘဲ နားလည်နိုင်စွမ်း၊ ပြန်ပြောနိုင်စွမ်း အမြန်နှုန်း မြင့်လာစေဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ ပထမ ဘာသာစကားကို အသုံးမပြုတော့ဘဲ ဝေါဟာရအသစ်တွေ အားလုံးကို သင်ယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာတစ်မျိုးတည်း Vocabulary စာရင်းရေးဖို့အတွက် အဓိပ္ပာယ်တူ စကားလုံးတွေ (ဥပမာ tall နဲ့ high)၊ ဆန့်ကျင်ဘက်စာလုံးတွေ (ဥပမာ့high နဲ့ low) ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ စကားလုံးမှာ အသံအပိုင်း (စည်းချက်) ဘယ်နှစ်ခုရှိတယ် (ဥပမာ Decision ဆိုရင် ၃ပိုင်း)၊ ဘယ်အပိုင်းကို ဖိဆိုရမယ် (ဥပမာ Banana ဆိုရင် ဒုတိယအပိုင်း) စသည်ဖြင့် အသံထွက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေလည်း ရေးမှတ်ထားရမယ်။ စကားလုံးရဲ့ အသုံးအနှုန်းကို ဖော်ပြတဲ့ ၀ါကျတွေကိုလည်း ကွက်လပ်ဖြည့်ပုံစံနဲ့ ရေးထားရပါမယ်။ (ဥပမာ Interest (စိတ်ပါဝင်စား) သုံးနှုန်းပုံကို I am not ............... in science fiction (ကျွန်တော် သိပ္ပံဝတ္ထုကို ------ခြင်းမရှိ) လို့ မှတ်သားထားနိုင်ပါတယ်။)
၄၀။ ဖျက်ပစ်ပါ။ သင်ယူပြီးစကားလုံးတွေ၊ ၀ါကျတွေ ဒါမှမဟုတ် စာမျက်နှာတစ်ခုလုံး ဖျက်ပစ်လိုက်ခြင်း အားဖြင့် စိတ်ဓာတ်တက်ကြွလာနိုင်ပါတယ်။ သင်ရမယ့် စကားလုံးစာရင်း သိပ်များမလာတဲ့ အတွက် ကြောင့်လည်း ကိုင်တွယ်နိုင်မယ့်အနေအထားပဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Permalink Reply by thaung on May 16, 2012 at 11:50
Permalink Reply by Zaw Win on May 16, 2012 at 12:38
It is great! I like it very much. Thanksalot of your good nature.
Permalink Reply by 32szjo8j4rnhw on May 16, 2012 at 17:42
thank infinity for you advice abut english skills
Permalink Reply by point on May 16, 2012 at 18:36
Permalink Reply by sansan on May 18, 2012 at 14:42
Permalink Reply by Htun Htun Soe on May 30, 2012 at 10:13
Permalink Reply by 2gm0qux6he7d6 on June 3, 2012 at 9:39
Thanks so much. I must be learn English for skill asathis way!
Permalink Reply by Zeyar on June 9, 2013 at 10:16